किन एक समुदायमा आधारित दृष्टिकोण ?
हरेक वर्ष, असुरक्षित विद्यालयहरु नष्ट हुन्छन् वा बाढी, आगलागी वा प्राकृतिक प्रकोपहरु द्वारा क्षति हुन्छन्। फलस्वरूप, हजारौं सय बालबालिकाहरु को ज्यान खतरामा रहन्छ र उनीहरु को आधारभूत गुणस्तर शिक्षा को अधिकार पनि जोखिममा हुन्छ । विद्यालय एक यस्तो ठाउँ हो जहाँ हरेक बच्चा उपस्थित हुनु पर्दछ। एक समुदाय को नाताले, हामी हाम्रा बालबालिकाहरु का लागि सुरक्षित विद्यालय बनाउनको लागि जिम्मेवार छौँ ।
सुरक्षित विद्यालय निर्माण गर्नको लागि एक समुदायमा आधारित दृष्टिकोण ले विद्यालय अपेक्षा गरेको खतरहरुको विरुद्ध प्रतिरोधी बनाउँछ र समुदायहरु लाई नयाँ कौशलता सिक्ने मौका दिन्छ।
समुदायमा आधारित दृष्टिकोण को मतलब यो हो कि समुदायहरु एक सुरक्षित विद्यालय सृजना गर्न योजना देखि लिएर संरचना र सृजना सम्म संलग्न हुन्छन्, । समुदायहरु ले सुरक्षित विद्यालय निर्माण बाट धेरै सिक्नु पर्दछ जसले उनीहरु लाई बढि क्षमतावान हुन मद्दत गर्दछ। समुदायहरुले, खतरहरुको पहिचान गर्न, तिनीहरुको जोखिमहरु कम गर्न, र प्रभावहरु बाट हुने खतराहरुका जवाफको तयारी गर्न सिक्न सक्छन् ।
एक समुदायमा आधारित दृष्टिकोणका दुई लक्ष्यहरु
एक सुरक्षित विद्यालय
एक अधिक क्षमताशिल समुदाय
समुदायमा आधारित दृष्टिकोणका फाइदाहरु :
उच्च गुणस्तरका निर्माणहरु । समुदायहरु ले विद्यालय निर्माणको निगरानी र धन को उचित प्रयोग भइरहेको छ छैन भनि जाँच गर्न सक्छन्।
सामुदायिक स्वामित्व। निर्माण समाप्त भएपछि सामुदायिक स्वामित्व को भावना ले गर्दा विद्यालय मर्मत मा सुधार हुनेछ।
सुध्रिड स्थानीय अर्थव्यवस्थाहरु । स्थानीय श्रमिकहरुलाई काम र र नयाँ कौशल सिक्न पहुँच हुनेछ।
फराकिलो सुरक्षा को संस्कृति। समुदायहरु ले आफ्नो घरहरुमा र छिमेकहरुमा , र साथै विद्यालय हरुमा भएको जोखिम राम्रो संग बुझ्दछन् । उनीहरु ले कसरी सुरक्षित निर्माणका प्रविधीहरु अपनाउने भनि सिक्नेछन् रआफूहरु र अन्य समुदायहरु का लागि सुरक्षाको लागि अभिवक्ता बन्ने छन् ।
समुदायमा आधारित दृष्टिकोण के हो ?
जब परियोजनाहरुका यि दृष्टिकोण हुन्छन् , समुदायहरु मूल रूप मा सबै चरणहरु मा सम्लग्न हुन्छन्। उनीहरु ले कुन ठाउँ मा बिद्यालय बनाईने हो र त्यसको रचना कसरि गरिने हो भन्ने बारेमा योजना मा सहयोग गर्दछन्। स्थानीय निर्माणकर्ताहरु बिद्यालय निर्माण मा मद्दत गर्दछन् र आमाबाबु र विद्यार्थी हरु निर्माण स्थल मा स्वयंसेवा दिन सक्दछन्।
समुदायको आवश्यकताहरु र क्षमता पूरा गर्न यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
समुदाय रखवाला बन्दछन्। जब एक बिद्यालय एक साथ बन्दछ, उनीहरु ले यो कसरि बनाईएको हो र के ले यस लाई सुरक्षित बनाउछ भन्ने बुज्दछन्।
सँगै विद्यालय बनाउदा यो एक प्रशिक्षणको अवसर बन्दछ। समुदाय ले आफ्नै घरहरु का लागि र उनि हरुको व्यापक समुदाय को लागि सुरक्षित निर्माण का बारेमा बिचारहरु लागू गर्न सक्दछन्।
समुदाय को दृष्टिकोण पांच सिद्धान्तहरू द्वारा निर्देशित छन् जसले यकीन दिलाउन मद्दत गर्दछन् कि लक्ष्यहरु प्राप्त होस्। पाँच सिद्धान्तहरूले बारे जान्नुहोस्
एक समुदायमा आधारित दृष्टिकोण र व्यापक सुरक्षाका पहलहरू
यो दृष्टिकोण ले व्यापक विद्यालय सुरक्षा (सीएसएस) लाई अगाडी बढाउछ
यो दृष्टिकोण ले विद्यालय सुरक्षा को लागि विश्वव्यापी पहल (डब्ल्यु आई एस एस) को कार्यान्वयन गर्न समर्थन गर्दछ।